निद्रा नलाग्ने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस | - ज्ञानविज्ञान
राति मिठो निद्रा लाग्यो भने बिहान उठेपछि मुड फ्रेस हुन्छ, एक किसिमको आनन्दको अनुभूति हुन्छ, अहाँ क्या मिठो निद्रा भन्ने र दिनभरि आफ्नो काममा जुट्ने जाँगर चल्छ। हुन पनि दिनभरिको कामको थकाइलाई मेट्न, शरीरलाई आराम दिन र शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्न निद्रा धेरै महत्वपूर्ण छ।
यदि कुनै रोग नलाग्दा पनि निद्रामा समस्या देखिएको हो भने निम्न तरिका अवलम्बन गर्दा निद्रामा सुधार आउनेछ।
दिउँसो के गर्ने र के नगर्ने ?
1. दिउँसो नसुत्ने, दिउँसो केही समय मात्र सुत्यो भने पनि राति छिटो निद्रा लाग्दैन।
2. बिहान र बेलुकाको समयमा केही शारीरिक परिश्रम गर्ने यसले शरीरमा स्फूर्ति जगाउँछ।
3. कफी, कडा चिया वा कोकाकोला जस्ता पदार्थहरु बेलुका नपिउने।
राति सुत्न जानुभन्दा पहिले के गर्ने र के नगर्ने ?
1. छिटो सुत्न नजाने। धेरै छिटो सुत्न गयो भने गहिरो निद्रा पर्दैन। सुत्न जाने उपयुक्त समय भनेको राति १० बजेदेखि १०.३० बजेसम्म हो।
2. निदाउनका लागि मदिरा नपिउने। रक्सी पिउने गर्दा पनि गहिरो निद्रा नपर्ने र बेलाबेलामा निद्रा खुल्ने हुन्छ।
3. सुत्न जानुभन्दा पहिले चुरोट/सुर्ती सेवन ग-यो भने मस्तिष्कमा एक प्रकारको उत्तेजना बढाउँछ र निद्रा आउन बाधा पार्छ। सुत्न जानुभन्दा १/२ घण्टा अगाडि यस्ता पदार्थ प्रयोग नगर्दा निद्रा आउन सहज हुन्छ।
4. भोकै सुत्नु राम्रो हुँदैन। पेट भोको भयो भने निद्रा लाग्दैन, सुत्नुभन्दा अगाडि धेरै पानी पियो भने पनि पिसाब लागेर उठिरहनुपर्ने हुन्छ र निद्रामा गडबडी आउँछ।
5. नियमित शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ। त्यसले निद्रा पर्न पनि सहयोग हुन्छ तर एकदमै बढी शारीरिक व्यायाम गर्नु भने हुँदैन।
6. लेख्ने, पढ्ने वा कम्प्यूटरमा काम गरिराख्नु भएको छ भने सुल्नुभन्दा पहिले करिब आधा घण्टा जति काम गर्न छोड्नुहोस् र रिल्याक्स गर्नुस्।
7. सकभर निद्राका लागि औषधी प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ। औषधी प्रयोग नगरी नहुने भए एक हप्ता वा त्योभन्दा बढीका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन।
8. सुत्नुभन्दा पहिले मनतातो दूध पिउँदा निद्रा लाग्न मद्दत हुन्छ।
9. सकिन्छ भने सुत्नुभन्दा एक डेढ घण्टा पहिले मन तातो पानीले नुहाउँदा पनि शरीर रिल्याक्स हुन्छ र निद्रा आउन सहयोग गर्छ।
बेलुका निद्रा लागेपछि सुत्ने र बिहान निद्रा खुलेपछि उठ्ने नियमित गर्नेहरुमा निदाउने र निद्राखुल्ने ठीक समय (साइकल) हुन्छ।सधैँ करिबकरिब एउटै समयमा सुत्ने र एउटै समयमा उठ्ने गर्दा निद्रामा प्रायः समस्या आउँदैन। तर सधैँ सुत्ने र उठ्ने समय फरक गरिरहँदा निद्रा लाग्ने र बिहान जाग्ने समय (साइकल) बिग्रिन्छ।
एउटै समयमा सुत्ने भन्नाले एकदम घडी मिलाउनु भने पर्दैन, भनौ १० बजे सुत्ने प्लान छ भने आधा घण्टा अघि वा आधा घण्टापछि हुँदा फरक पर्दैन तर कहिले १० बजे कहिले १२ बजे वा कहिले १ बजे सुत्न लाग्यो भने सुत्ने उठ्ने ठीक समय (साइकल) बिग्रिन्छ।धेरै मानसिक तनाव भएर वा विभिन्न रोग लागेर निद्रा नलागेको हो भने तनाव घटाउने र रोगको उपचार गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ।
Don't Miss it दिनमा धेरै निन्द्रा लाग्नु डाइबेटिजको संकेत !
Up Next जीवन उपयोगी चाणक्य नीति
9 hours ago Pradeep Karki
9 hours ago biplov
सावधान ! गम्भीर रोगको संकेत हुनसक्छ रिँगटा
रिँगटा लाग्दा चारैतिर वस्तु घुमेको जस्तो लाग्छ । यो एक साधारण रोग हो तर लापरबाही गर्नु हुदैन । किनकी यो…
सफल र खुसी जीवनका लागि ओशोको केहि जीवनउपयोगी भनाइ
भारतको मध्य प्रदेशमा पर्ने कुचवाडा गाउँमा ११ डिसेम्बर १९३१ मा ओशोको जन्म भएको थियो । उनको नाम रजनीश चन्द्रमोहन थियो…
भाग्यमानीसँग हुने यी कुरा, तपाईसँग छ कि छैन ? एक पटक अबस्य पढ्नुहोस्
सुख र दुःख आउँछ जान्छ । त्यसैले भन्छन नि कुनै पनि मानिस कहिल्यै पनि सुखी वा दुखी भईराख्दैन । यसै…
बिषालु च्याउबाट कसरी जोगिने ? थाहा पाउँनुहोस्
च्याउ अति नै पौष्टिकतत्वयुक्त र स्वास्थ्यबर्द्धक खाद्यवस्तुका रूपमा चिनिने गर्छ । बर्षाको मौसममा नेपालका वन, पाखा तथा खाली चउरहरूमा समेत…
जानी राख्नुहोस् राति सुत्नुअघि नुहाउँदा यस्ता ७ फाइदा हुन्छन्
जो सुकै पनि दिनभरको थकानपछि रातीको निन्दा राम्रो भएको चाहन्छ । तर राम्रो निन्द्रा आफै नहुन सक्छ । हामीले राम्रो…
कसरी सधै जवान देखिने ? जान्नुहोस
प्रसस्त पानी पिउने शरीरलाई आवश्यक पर्ने पानी नपिउँदा छाला सुख्खा हुन्छ । प्रशस्त पानी पिउदा शरीर भित्रका फोहर पदार्थहरु मल,…
यस्ता छन्, धेरै पानी नपिउँदा का समस्याहरु
– पर्याप्त पानीको सेवन नभएमा पाचनसम्बन्धी समस्या पनि देखिन थाल्दछ। पानीको कमीका कारण खाना पच्नमा समस्या हुन्छ। जसका कारण शरीरको…
व्रत बस्दा साबुदाना खानु शाकाहारी कि मांसाहारी ?
महिलाहरु ब्रतमा धेरै जसो फलफुल खाने गर्दछन तर व्रतमा हरेक घरमा साबूदाना खानु सामान्य हो । कयौं क्षेत्रमा यसलाई प्रसादको…